Arzantina: Ilay Tranoheva Ara-kolontsaina Ao An-tanànan’i Piedrabuena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2017 13:07 GMT
(Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia nivoaka tamin'ny Aogositra 2011)
Fanamarihana avy amin'ny Rising Voices: Ity lahatsoratra ity dia manohy ireo andiany manasongadina ireo tetikasanay izay vao avy nanao fangatahana famatsiambola RV , kanefa mbola manohy mampiasa ny median'lontsotra hitantarany ireo tantaran'ny vondrom-piarahamonina misy azy.
Ao amin'ny Villa Lugano, any amin'ny manodidina ny tanànan'i Buenos Aires, Arzantina, no misy ny tanàna antsoina hoe Piedrabuena, izay lasa ambohimpihaonana ho fikatrohana ho an'ny vondrom-piarahamonina miaraka amin'ny zavakanto, mozika sy mediam-bahoaka. Ao anivon'ity tanàna misy tokantrano miisa 2.100 sy mponina manodidina ny 20.000 ity, no misy ny Galpón Cultural Piedrabuenarte [es] (na ny Tranoheva Ara-kolontsain'i Piedrabuenarte). Efa nisy fotoana ity toerana ity nampiasaina ho fanatobiana ireo haingon-tsehatra sy ireo entana maro hafa avy ao amin'ilay Colón Theater malaza. Ary rehefa tsy niasa intsony ity Tranoheva lehibe ity, mpanakanto vitsivitsy tao an-tanàna no nieritretreritra fa mety ho lasa fototra ho an'ny vondrom-piarahamonina ara-kolontsaina ho an'ny ankizy, tanora sy olon-dehibe ao Piedrabuena ity toerana ity.
Tranoheva Ara-kolontsaina Piedrabuenarte
Nanomboka tamin'ny 2006, nanomboka nanolotra atrikasa aminà lohahevitra isankarazany ilay Tranoheva, toy ny sariitatra, ny saripika, tantara an-dapihazo, ny vely amponga, ary hatramin'ny famoronana fitaovana fampiasa amin'ny mozika natao avy aminà akora naverina nampiasaina indray. Misokatra ho an'ny olontsotra na vondron'olona eo an-tanàna ilay tranoheva, hatramin'ireo avy any ivelany, izay mizara fahalalàna sy traikefa amin'ireo mponina ao an-toerana. Toerana fanomanan'ireo mpanakanto ny sary an-drindrina hanaingo ny rihana ambany amin'ireo tangoron-trano ao an-tanàna ihany koa ity tranoheva ity.
Tena fanta-daza eran'ny tanàna ireo sahanasa nibahan-toerana tao anatiny sy teny ivelan'ilay tranoheva, hatramin'ny fotoana nahatonga azy ho toeram-pivoriana tsy tapaka nandritry ny taona iray manontolo. Ambonin'izany, miely amin'ny takoritsika etsy sy eroa indraindray ny vaovao momba ireo atrikasa sy hetsika ho avy, fa indrindra ihany koa amin'ny alalan'ny fampiasàna ireo tambajotra sosialy toy ny Facebook. Na izany aza, mino ireo vondronà mpitarika fa tokony ho maro ireo olona mahafantatra ireo sahanasa misy, izay manome fijery samihafa momba izay fomba mazàna anoritsoritan'ny filazam-baovao ilay tanàna. Amin'ny alalan'ny fampiasàna fantsona YouTube antsoina hoe Piedrabuenarte TV, misy fizaràna mampiseho tsy tapaka ny sasany amin'ireny sahanasa ireny, sy maneho hoe fiainana toy ny ahoana ny andavandrom-piainana ao amin'ity tanàna ity. Tonga koa any amin'ireo mponina tao fahiny izay lasa mipetraka any ivelany ireny lahatsary ireny ka ahafahan-dry zareo manana fifandraisana amin'ireo mpiray vodirindrina taminy.
Misy drafitra maromaro hiarahana miasa akaiky kokoa amin'ny tanora eo an-tanàna, izay hampisehoana ny fomba azon'izy ireo ampiasàna fakantsary amin'ny findain'izy ireo ho fandraisany anjara amin'ilay fantsona YouTube. Hahafahana mahita fomba fijery fanampiny ny tanàna mifangaroharon'i Piedrabuena io. Ao anatin'ny lahatsary manaraka, roa amin'ireo mpamorona ilay Tranoheva, Juan “Pepi” Garachico sy Lucian Garramuño, no niresaka momba ny lanjan'ity Tranoheva ity ho an'ireo mponina sy ny fomba fampiasan'izy ireo ny mediam-bahoaka hitantaràna ny tantaran'i Piedrabuena.